Tsenan’Anosibe : mirongatra ny aretim-pivalanana noho ny loto | NewsMada
Fantatra omaly tetsy amin’ny BMH Isotry araka ny nanambaran’ny dokotera Durand Dérys lehiben’ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamam-bahoaka sy ny “hygiène” mikasika ny valin’ny fitiliana izay natao teny amin’ny laboratoana tsy miankina fa misy karazana aretim-pivalanana miparitaka, vokatry ny loto eny an-tsena.
Misy ny valanaretim-pivalanana vokatry ny loto ao amin’ny tsenan’Anosibe. Voaporofo tamin’ny alalan’ny fitiliana nataon’ny mpitsabo ao amin’ny BMH niarahana tamin’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo izany.
Nanaitra ny sain’ny kaominina ny tahan’ny aretim-pivalanana ambony tamin’ireo tobim-pahasalaman’ny BMH sy ny CSBII efatra izay tantanin’ny kaominina. Hita fa avy ao amin’ny tsenan’Anosibe no fototra nipoiran’izany, satria saika ao avokoa no mamatsy ireo sakafo eto an-dRenivohitra.
Anisan’ny antony nanaovan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra fanadiovana faobe herinandro vitsy lasa izay io loton’ny tsena mitera-doza ho an’ny mpiantsena sy ny mpanjifa ny sakafo amidy ao Anosibe io.
Ankoatra ny fanadiovana, nisy koa ny fanaparitahana fanafody hisorohana ny otrik’aretina eny an-tsena toy ny hypochlorite de calcium, HTH, ny Cresil…
Raisina ny fepetra hentitra
Nanapa-kevitra ny kaominina Antananarivo manoloana izany fa tsy maintsy mivarotra ambony latabatra daholo ny mpivarotra rehetra. Miala 70 cm amin’ny tany ny talatalana, araka ny fampiharana ny lalànan’ny fahadiovana amin’ny fiadiana amin’ny loto.
Eo koa ny fiaraha-mientana manadio isan’andro fa tsy miandry ny kaominina foana, indrindra indrindra ny fitandroana ny sakafo amidy toy ny hani-masaka izay tsy maintsy asiana “vitrine”sy ara-dalàna ny fahadiovana.
Misy ny fanaraha-maso ataon’ny “inspecteur d’hygiène” ny fahadiovana eny an-tsena mikasika ny fahadiovan’ny sakafo sy ny toerana hivarotana ary ny fitaovana ampiasaina. Jerena koa ny olona mivarotra raha salama tsara tsy misy aretina mitaiza, areti-mifindra…